Ao Amin'ny Aterineto hiresaka Ny taona. Lyon - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Ao Amin'ny Aterineto hiresaka Ny taona. Lyon
Hanomboka fiainam-baovao ary tsy Hanenenanao izany.
Ny fahatelo Lyon, tanàna lehibe Indrindra ao Frantsa, dia manana Endri-javatra miavakaAfaka manana ny zava-drehetra, Na ny kolontsaina mahaliana, fialam-Boly, ny natiora. Raha tia ny zavaboary, afaka Miala sasatra ao latet Park, Ny tanàna afovoan'ny ao.
Ankafizo fomba fijery lehibe ny Tanàna, dia afaka manao ny Fourvier havoana.
Ankafizo eo an-toerana Lyon Mahandro sakafo amin'ny trano fisakafoanana. Mandamina ny mandeha miaraka amin'Ny namana ao amin'ny Place de La Terreau. Izany no namorona ny tapahina Ireo taratasim amin'ny kianja lehibe. Faharoa ity toerana manan-danja Indrindra ao amin'ny Lyon Taorian'ny toerana Bellecourt. An-jatony, an'arivony sonia Ho an'ny Mampiaraka an-Tserasera mba mahita olona, ary Mahita ny tsirairay. Hanatevin-daharana ny tambajotra sosialy Lehibe indrindra izay mampifandray ny Olona an-tapitrisany manerana izao Tontolo izao.Deconstruct Mamorona ny mombamomba azy, Chat, mpanadala, raiki-pitia.
Midira Ao Druzhba Sy amin'Ny chat Ao Kiev Maimaim-poana, Ary na
Вӓшлимӓштӹ Гӹц пасна
vehivavy manambady mba hihaona dokam-barotra ny lahatsary amin'ny chat tsy misy sonia ary maimaim-poana ny tovovavy ny firaisana ara-nofo Niaraka watch video video Mampiaraka toerana sary Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat online fampitana video Niaraka tamin'ny zazavavy an-tserasera malalaka ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana Fiarahana tsy misy sary maimaim-poana tsy miankina lahatsary Mampiaraka